List Categories and Listings by M: Root - Consumer Reviews and Ratings
Made-in-Myanmar (မြန်မာပြည်ဖြစ် ထုတ်ကုန်များ) (0)Magazines (မဂ္ဂဇင်းများ) (11)Magway (မကွေး) (0)Magway Gov (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Magway Parliament (မကွေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Malaysians in Myanmar (Melayu) (2)Mandalay (မန္တလေး) (22)Mandalay Gov (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး အစိုးရ) (0)Mandalay Parliament (မန္တလေးတိုင်း ​ဒေသကြီး လွှတ်တော်) (0)Manufacturers (ကုန်ထုတ်) (146)Maps (မြေပုံလမ်းညွှန်) (7)Marketing (ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်ရေး) (6)Mayangone (မရမ်းကုန်း) (23)Media (စာနယ်ဇင်း) (181)Mexican Restaurants (မက်စီကန်) (in Yangon (ရန်ကုန်)) (3)Mexican Restaurants (မက်စီကန်) (in Mandalay (မန္တလေး)) (0)Mexican Restaurants (မက်စီကန်) (in Bagan (ပုဂံ)) (0)Mexican Restaurants (မက်စီကန်) (in Inle/Kalaw (အင်းလေး/ကလော)) (0)Mingalardone (မင်္ဂလာဒုံ) (6)Mingalartaung nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) (15)Ministries (ဝန်ကြီးဌာန) (47)Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်း) (Services (ဝန်ဆောင်မှု)) (13)Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်း) (Computer (ကွန်ပျူတာ)) (12)Mobile Phone Vendors (ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ) (1)Mon Parliament (မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်) (0)Mon sites (မွန် ဝဗ်ဆိုက်များ) (6)Mon State Gov (မွန် ပြည်နယ် အစိုးရ) (0)Music (သီချင်း) (20)Music Bands (တီးဝိုင်း) (6)Musicians (ဂီတ အနုပညာရှင်) (13)Musicians (အနုပညာရှင်) (15)Muslim (1)Myanmar eBooks (10)Myanmar Embassies (မြန်မာသံရုံး) (44)Myanmar Ethnic Food (မြန်မာ ရိုးရာ) (in Yangon (ရန်ကုန်)) (3)Myanmar Ethnic Food (မြန်မာ ရိုးရာ) (in Mandalay (မန္တလေး)) (0)Myanmar Ethnic Food (မြန်မာ ရိုးရာ) (in Bagan (ပုဂံ)) (0)Myanmar Ethnic Food (မြန်မာ ရိုးရာ) (in Inle/Kalaw (အင်းလေး/ကလော)) (0)Myanmars in Australia (1)Myanmars in India (အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ) (0)Myanmars in Japan (ဂျပန်ရောက် မြန်မာ) (1)Myanmars in Korea (1)Myanmars in Malaysia (မလေးရှားရောက် မြန်မာ) (1)Myanmars in Singapore (စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ) (5)Myanmars in Thailand (ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ) (10)Myanmars in the US (အမေရိကရောက် မြန်မာ) (12)	Results 1 - 10 of 1437
MM-CERT (Myanmar Computer Emergency Resp... Myanmar Computer Emergency Response Team
Phone	: 650891, 656685
Fax	: 656684
Overseas Communications Building
Kabaaye Pagoda Road,
Mayangone ...Category:Associations (အသင်း) Votes1
Myanmar Times Category:Media (စာနယ်ဇင်း) Votes2
Myanmar U.S. Chamber of Commerce The founding members and advisors of the Myanmar U.S. Chamber of Commerce (the "Chamber of Commerce") are pleased to announce the founding of the Cham ...Category:Myanmars in the US (အမေရိကရောက် မြန်မာ) Votes1
Myanmar Tourism Federation (MTF) official national tourism body,aparent organization composed of 11 other tourism related organizations.Category:Travel (ခရီးသွား) Votes1
Myanmar Hospitality & Tourism Conference Category:Tradeshows (ကုန်စည် ပြပွဲ) Votes1
Myanmars.NET MYANMAR: travel asia. Nearly 5000 pictures & 3000 pages of information on Myanmar (aka. Burma/Birmania/Birmanie) and asian countries.3/1 MICT Park, HlaingCategory:Services (ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း) Telephone(+95-01) 652323, 652250
Myanmar Football Federation (MFF) Category:Sports (အားကစား) Votes13
MPT (Myanmar Post and Telecoms) MPT ၏ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ဆက်လိုက်ပါသည်...
Call waiting ဆိုသည ...Category:ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု) Votes8
Myanmar Computer Federation (MCF) မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်Category:Associations (အသင်း) Votes10
Myanmar ICT Development Corporation ( MI... Category:Associations (အသင်း) Votes3